#Madagascar : Lalam-pirenena fahafito – Fiara telo nahazoan’ny mpanakan-dalana Ar 2 tapitrisa | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Lalam-pirenena fahafito – Fiara telo nahazoan’ny mpanakan-dalana Ar 2 tapitrisa
Intelo namely tamina toerana iray ireo jiolahy mpanakan-dalana teo amin’ny tetezan’Amboasary Behenjy amin’iny lalam-pirenena fahafito iny, ny marainan’ny zoma 8 jona, nanodidina ny tamin’ny 3 ora tany.Niisa enina ireo olon-dratsy izay nitondra fitaovam-piadiana. Fiara taksiborosy marika Mazda roa, nitondra olona 15 avy, sy fiara tsy mataho-dalana iray, nitarika fiara marika BMW nisy fahasimbana no nasesin’ireo dahalo nosakanana tamin’izany.
« Olona roa tao anatin’ireo fiara voasakana no naratra vokatry ny vono nahazo azy ireo. Mitotaly Ar 2.075.000 ny vola lasan’ireo jiolahy mpanakan-dalana, miaraka amin’ny firavaka volamena sy finday telo », hoy ny fitarainan’ireo niharam-pahavoazana. Lasan’izy ireo hatramin’ny fanalahidin’ilay fiara marika BMW notarihina. « Basy poleta iray no nentin’ireo mpanakan-dalana, miaraka amin’ny vy matevina, izay natsivalany teo ambony tetezana, nanamora ny asa ratsiny », araka ny fitantaran’ireo voatafika tamin’ny zandary manao ny famotorana. « Mety ho nitifitra ireo dahalo satria nahitana taim-bala nirefy 9mm teo amin’ilay toerana nisehoan’ny fanakanan-dalana », hoy ny fanazavana avy amin’ny Zandarimaria.
Nisy fotoana tena nampahazo vahana ny fanafihana mitam-piadiana sy fandrobana teny amin’iny lalam-pirenena fahafito iny. Nandray andraikitra anefa ireo mpitantana kaoperativa ka nametraka ny amin’ny tokony hiarahan’ireo fiara mandeha eny an-dalana sy ny fiaraha-miasa tamin’ny zandary. Vokany, dia nilamindamin-dratsy ny fanafihana saingy izao niverina izao indray.